ဆုံဆည်းရာ: ပြည်တွင်းမှပေးပို့လာသော ကဗျာတပုဒ်
မြူနှင်းတွေ ချယ် တဲ့ ရေတံခွန်၊
မြခနောက် နဲ့ ရန်ကင်းတောင်တွေ
ဒီစာကို ခင်ဗျားတို့ လည်း
ပြင်စည် နဲ့ ညောင်ရမ်းဆောင်တွေမှာ
မန်းချယ်ရီ နဲ့ မန်းသီရိဆောင်တွေမှာ
ဒီလိုသာ ရိုက်သွင်းတိုင်းသာ ရရင်
မောင်တို့ မယ်တို့ စစ်တပ်ဖွဲ့လို့ရပြီ။
၀န်ထမ်းဆို တာ မဖြစ်ချင်လိုက်တာ။
ကျုပ်တို့ ဘယ်လောက် စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ
ကျုပ်တို့ ဘယ်လောက် အနေကျပ်တယ်ဆိုတာ
ဂိတ်ပတ်စ် ဆိုတာကြီးရမှ ထွက်ရတယ်ဆိုတာ
ဓါတ်ခဲမပါတဲ့ နာရီတလုံး ခြောက်နာရီမှာ
ေ၀၀ါးတဲ့ အနာဂတ် ကို
အိပ်မက် မက်ချင်ယောင် ဆောင်နေရတာ….
လဘက်ရည်ဆိုင် နဲ့ ဘောပွဲရုံကို
ပျော်မွေ့ပြီး စာကို တကယ်
ကျုပ်တို့ အင်ဂျင်နီယာ အတတ်ကို
ဘာအမြင်ရှိလို့ တကယ် တတ်မှာလဲ။
ကူးချမယ် ဟိုနိုင်ငံ က ကျမ်းစာအုပ်
မဖတ်ရဲဘူး နိုင်ငံတကာ စမနာမှာ
ငါတင်မက သပန ပါ ပြုတ်သွားမယ်။
ဒီတော့ လည်း ဆရာမက အလည်သား
နိုင်ငံတကာမှာ ဖတ်လို့ မရဘူးတဲ့
ဖြစ်နေရတဲ့ ဘ၀ ကို
နေဦး ခဏ ….
ဒါတောင် သပန က
ကိုယ့်ဘာသာ ဂလိထိုး ရယ်ရမလို ငိုရမလိုပဲ။
ဆရာလုပ်တော့မှ တွေ့ပြီ ဒုက္ခ။
ဒီတော့လည်း သိပ်ပိုင် သပေါ့
ကျက်တူရွေး နည်းနဲ့ တက်ရတယ်။
ပြီးတော့ ကျုပ်တို့ ကျူရှင်ပြန်ဖွင့်ပြန်တယ် နယ်ကျောင်းတွေမှာ
ကျက်တူရွေးနည်းနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကိုယ်က ပြန်သင်
ကိုယ်အရပ် နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်။
ဒီလို သပန အောက်က ကျောင်းကထွက်သူတွေ
ဟဲ..ဟဲ (ကိုယ့်လူမျိူးကို စော်ကားတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ)
စုန်းပြူးစိတွေ ချည်း ရသလို
ဒီတော့မှ အနှီ နိုင်ငံခြားရောက်
သူတို့ နောက်မျိုးဆက် ကို
ကဲ ဒါတွေ ထားတော့…
ဒီလို နဲ့ လုပ်နေရင်းသဘောပေါက်ပြီး
ဗမာပြည် အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေး
ငါတော့ တရားခံ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟဲ့
ဒါပေမယ့် ငါ့ဝမ်း ငါ့ခါး
ငါ ဘယ် လို ထမ်းမလဲ လို့ စဉ်းစားလိုက်ရတာ
ကျုပ်တို့ကို သမိုင်းတရားခံ လို့
တကယ် က ကျုပ်တို့ဟာ
Posted by Tide at 12:57 PM
အခုတော့ မောင်သောင်းရဲ့ သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီး ဌာန(သနပ) အောက်က ဖြစ်နေတော့ စစ်ပုံစံ မန္တလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ပေ့ါ။ ၉၆ ထိ တုန်းကတော့ မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်ပါ။
ဒီကဗျာရေးသူတွေရဲ့ အခြေအနေကို ဝေမျှခံစားပေးရင်း ၊ မြေဇာပင်ဘ၀က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။
သမိုင်း မြေဇာပင်တွေပါဗျာ။ , u r right , very good, hey keep on
November 13, 2007 at 9:18 PM
Saung Yune La (aka) Way said...
This poem is the best ever.
November 14, 2007 at 6:17 AM
အမိတက္ကသိုလ်က ညီနောင်တို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ်။ ညီကဗျာကို ဖတ်ရင် ဟိုးအတိတ်က အမ်အိုင်တီကို လွမ်းမိတယ်။ အဲဒီအချိန်က ၀ိုင်အိုင်တီက ၀ါရင့်ဆရာတွေလာပြီး ဧည့်ပို့ချ ဘို့ တောင်းဆိုးခဲ့ တဲ့ ၉၅ အခွင့် အရေးတိုက်ပွဲ နဲ့ ၉၆ လှုပ်ရှားမှု့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း သတိရမိတယ်။ တို့တစ်တွေဟာ လူငယ်တွေပါ။
'Dare to think'
'Dare to say'
'Dare to do'
'Dare to fight for right'
ဘာလို့မြေဇာပင်အဖြစ်ခံရမှာ လဲ။ သမိုင်းသစ်ကို ဖန်တီးသူ။ အနာဂါတ်ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်ခံယူ နိုင်ဘို့ ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဘို့ မျက်စိကိုဖွင့်၊နားကို စွန့်ထား ။
ဒီကဗျာဟာ ကျုပ်တို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။ ကဗျာရေးသူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ၉၈ နောက်ပိုင်း ဆယ်တန်းအောင်တဲ့သူတွေဟာ ကံဆိုးသူတွေပါ။ အင်ဂျင်နီယာကို စိတ်ဝင်စားလို့ တက်ချင်လည်း တက္ကသိုလ်က မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သပန ကဖွင့်တဲ့ ဒီသင်တန်းကပဲ တစ်ခုတည်းသော အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ် ဖြစ်နေတော့ ၀င်ခဲ့ရတာပါ။